2022 Yakanyanya Simba Mapasipoti Index inofumura 'kufamba rusaruraganda'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » 2022 Yakanyanya Simba Mapasipoti Index inofumura 'kufamba rusaruraganda'
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Singapore Kupwanya Nhau • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
1 vhiki kare
2022 nyika 'yakanyanya simba mapasipoti' index inofumura 'kushanya kwerusaruraganda'
Maererano nemushumo, kubudirira kwekufamba kwakaonekwa nevagari venyika dzepamusoro-soro nepamusoro-soro "kwauya nemutengo" wenyika dzine mari shoma uye idzo dzinonzi "dzine ngozi huru" maererano nekuchengeteka nezvimwe zvinofungwa.
Kambani yeUK Henley & Partners yakaburitsa ichangoburwa yepasirese pasipoti chinzvimbo index nhasi - ongororo yekufamba kwepasirese yakawana kuti vagari vemo. Japani uye Singapore inobata mapasipoti ane hushamwari zvakanyanya pasi rose muna 2022.
Pasina accounting yeCCIDID-19 zvirambidzo, masanji ekutanga 2022 anoreva izvozvo Japanese uye maSingapore anogona sezviri pachena kuwana nyika dze192 pasina visa.
Imwe nyika yeAsia, Chammhembe Koria, yakasungwa neGermany pachinzvimbo chechipiri parunyorwa rwenyika zana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe. Vamwe vese vepamusoro gumi vanotongwa nenyika dzeEU, iyo UK neUS iri pachinhanho chechitanhatu, uye Australia, Canada, uye nyika dzeEastern Europe dzinotora vatambi vepamusoro.
Zvizvarwa zveAfghan kune rumwe rutivi zvinogona kufamba vhiza-mahara kuenda kunzvimbo dze26 chete.
Chimiro chakayambira nezve COVID-19 zvirambidzo zviri kuwedzera 'kusarurana' pakati penyika dzakapfuma nedzirombo, uye gaka riri kukura murusununguko rwekufamba rwunofarirwa nenyika dzakapfuma kupesana nedzinopihwa varombo.
Chirevo ichi chakataurawo kuti "kusaenzana" mukufamba kwepasirese kwakawedzera nezvipingamupinyi zvekufamba mukati medenda, Secretary-General weUN, Antonio Guterres nguva pfupi yapfuura achifananidza zvirambidzo zvakaisirwa nyika zhinji dzemuAfrica ne“kufamba kwerusaruraganda.”
"Zvinodhura zvinodikanwa zvine chekuita nekufamba kwepasirese zvinogadzira kusaenzana uye rusarura," akadaro Mehari Taddele Maru, purofesa wenguva pfupi paMigration Policy Center paEuropean University Institute, achiwedzera kuti nyika dzakabudirira "hadzina nguva dzose [kugovera]" chido chenyika dzichiri kusimukira. kupindura "kushanduka kwemamiriro ezvinhu."
"COVID-19 uye kudyidzana kwayo nekusagadzikana uye kusaenzana kwakaratidza uye kwakawedzera mutsauko unotyisa wekufamba kwepasirese pakati penyika dzakapfuma dzakabudirira nevamwe vadzo varombo," Mehari akawedzera.
Zvichakadaro, chirevo chakafanotaura kumwe kusavimbika pakufamba uye kufamba kwegore rose, tichifunga nezvekukwira kweiyo Omicron musiyano wekoronavirus. Kubuda kwe "dambudziko idzva rakasimba kudaro" kwaive "kutadza kukuru kwezvematongerwo enyika" kuUS, UK, neEU nekusapa mari iri nani uye yekudzivirira yekudzivirira kumaodzanyemba kweAfrica, sekureva kwakataurwa naPurofesa weColumbia University Misha Glenny. ichiperekedza mushumo.